Imithetho kaRhulumente yokuTattoo - Iindidi E Zomzimba Ubugcisa
Ngaphezulu Size Clothing Stores
Imithetho kaRhulumente yokuTattoo
Ukucinga ngokufumana itattoo sisigqibo esikhulu. Ukuvula ivenkile yakho kunokuba yinto enkulu ngakumbi. Nangona kunjalo, ukuqonda imithetho elawula ilizwe lakho kungenza ukuba intloko yakho ijikeleze, kuba imithetho ye tattoo yamazwe iyahluka kulo lonke elase-US Abanye bathi bade bayishiye imimiselo ukuya ezixekweni nakwiikomishini, ezinokwenza oku kube yinto edidayo.
Kutheni ulawula iiTattoos?
Zimbini izizathu eziphambili zemithetho ye tattoo. Abokuqala ngawowiso-mthetho abangazithandiyo ii-tatoos kwaye abacinga ukuba baziphethe kakubi okanye baphosakele. Aba bawisi-mthetho banokusebenzisa ifuthe labo ukwenza iitatoo ngokungekho mthethweni okanye babeke izithintelo kubo. Eyesibini, kwaye ixhaphake kakhulu, izizathu zezempilo.
Igalari yokubhala iTattoo
Umvambo weTattoos Igalari yeSithombe
Ukuba ivenkile ayihlambulukanga kwaye izixhobo azinazintsholongwane, ukufumana umvambo kunokuba yingozi. Izifo ezithwala igazi njenge-hepatitis B, i-hepatitis C, kunye ne-HIV / AIDS zinokudluliselwa ngenaliti ye tattoo esetyenziswe komnye umntu. Ii-Inks zinokugcina ii-virus okanye ii-bacteria ukuba zisetyenziswa kubantu abaninzi. Imiphezulu engcolileyo kwivenkile kunye nezandla ezingahlanjwanga nazo ziyiyo imithombo yosulelo olunokubakho .
Ezinye iinkxalabo zibandakanya:
Iitattoo ezimbi . Izixhobo ezenziwe ekhaya zinokubeka i-inki nzulu kakhulu okanye kube nzima ukuyilawula, zikushiye unezikrelemnqa kunye / okanye umvambo ongathandekiyo.
Ii-inki ezingakhuselekanga . Malunga nalo naluphi na ulwelo olunombala okanye umgubo unokufakwa ngaphakathi kwesikhumba ukwenza umvambo, kodwa oko akuthethi ukuba licebo elilungileyo elo. Okona kungcono, i-inki yokwexeshana inokubonakala imbi, iphela ngokukhawuleza, kunye / okanye ikunike isiva. Okona kubi, inokukutyhefa.
Umthetho kuwo onke ama-50 States
Oklahoma yayikukugcina ukubanjwa kwamvambo kungavunyelwanga apho, kodwa ukusukela ngoNovemba 1, 2006, kusemthethweni ukwenza itattoo kumazwe angama-50. Nangona kunjalo imithetho yesixeko , ungachazi imithetho ye tattoo, emisela ukuba ungafumana i-inki kwidolophu yakho. Kungenxa yokuba iitatoo zisemthethweni kwimeko ethile okanye kwisixeko oko akuthethi ukuba nabani na angacwangcisa ivenkile. Kwiindawo ezininzi, umculi we tattoo kufuneka abe njalo unelayisensi kwaye ivenkile kufuneka iphumelele ukuhlolwa, nokuba ngurhulumente okanye ngamagosa endawo. Ezinye iindawo zifuna nje ukuba umculi abhalise kurhulumente. Kuphela kwiindawo ezimbalwa apho iitattoo azilawulwa konke konke.
Amazwe amaninzi ayayeka ekufuneni ukuba amagcisa anikwe iphepha-mvume kwaye iivenkile zinendlela elungileyo yokhuseleko. Ezinye iindawo zinemigaqo engqongqo ngakumbi malunga nokuba ngubani onokufumana umvambo kwaye luhlobo luni. Eminye imimiselo ibandakanya:
Awungekhe ufumane itattoo ukuba ungaphantsi kwe-18.
Awunakho ukufumana ii-tatoo kumalungu athile omzimba, njengasebusweni.
Awunakho ukuba negama elihlaselayo okanye elinentiyo okanye imifanekiso ebhalwe umvambo.
Awunakho ukwenza umvambo ekhaya okanye ethekweni, nokuba umzobi unelayisensi, kuba ilayisensi isebenza kuphela kwindawo ekuthengiswa kuyo.
IAlabama Abancinci bafuna imvume kumzali yeetattoos.
IAlaska Iitattoos azivumelekanga kubantwana.
IArizona Umzali kufuneka abekho xa kubhalwa abantwana.
IArkansas Utyikityo lomzali luyafuneka kumvambo wabantwana; amagcisa kufuneka aqinisekiswe; Ivenkile kufuneka ihlawule umrhumo wonyaka
California Imigangatho yokhuseleko yeNkomfa yaseCalifornia yamaGosa ezeMpilo waseKhaya kufuneka ifezekiswe; Ukwenza umvambo ebantwaneni yinto engeyiyo.
IColorado Abancinci banokufumana umvambo ngemvume yabazali.
Unxibelelwano Ukupeyinta kufuneka kugqitywe phantsi kweliso likagqirha okanye umongikazi obhalisiweyo; Abancinci bafuna imvume yomzali okanye yomgcini.
D.C. Amagcisa omzimba kufuneka abe nelayisensi.
Delaware Kufuneka uhlangane nemigangatho ethile yokhuseleko; Ukwenza umvambo kumntwana ngaphandle kwemvume yomzali akukho semthethweni
IFlorida Kuphela ngabo banelayisensi yokwenza amayeza okanye amazinyo okanye phantsi kweliso laba bantu abanokwenza i-tattoo; Ukuthambisa abantwana kufuna imvume kumzali.
Jojiya Ukupeyinta i-intshi kufutshane nebhola yamehlo akuvumelekanga; Abantwana bangabhalwa kuphela ngugqirha onelayisensi okanye i-osteopath okanye umntu ophantsi kweliso labo.
IHawaii Ukuvalwa kwamvambo kubantwana kufuna imvume; iifom zemvume kufuneka zigcinwe iminyaka emibini ngendlela eyimfihlo.
Idaho Ukwenza umvambo kubantwana abali-14 nangaphantsi akuvumelekanga; abancinci ukusuka kwi-14-18 bafuna imvume kubukho begcisa lomvambo.
I-Illinois Kufuneka uhlangabezane neemfuno zokhuseleko zeTattoo kunye nokuBhaliswa kwaBantu abaBhalisiweyo. abancinci banokubhalwa kuphela ngugqirha; Imvume yomzali iyafuneka ukuba umntwana abe seholweni
Indiana Kufuneka uhlangabezane neemfuno zokhuseleko kunye nokusebenza kwezococeko; Iitatto zifuna umgcini okhoyo kunye nemvume ebhaliweyo
Iowa Kuya kufuneka ufumane imvume yokusebenzisa indawo yokubhala; Abantwana abavumelekanga ukuba babhalwe iitattoo ngaphandle kokuba batshatile
EKansas Amagcisa eTattoo afuna iphepha-mvume; Abancinci bafuna imvume ebhaliweyo yokufumana umvambo kwaye imvume kufuneka igcinwe iminyaka emihlanu.
EKentucky Amagcisa eTattoo kufuneka abhaliswe kwisebe lezempilo; imvume iyafuneka kumvambo womntwana.
ELouisiana Ubhaliso luyafuneka kubazobi be tattoo; Abantwana bafuna imvume kwiitattoos.
Maine Ukwenza umvambo kumntwana osemncinci akukho semthethweni; amagcisa tattoo kufuneka ahlangabezane neemfuno zelayisensi yezempilo yoluntu
EMaryland Ukuvalwa kwamathambo akuvumelekanga kwii-salon.
EMassachusetts Iibhodi zezempilo zenza imigaqo; Umvambo kufuneka wenziwe ngugqirha kwaye kufuneka kudityaniswe ikhowudi yemodeli
Kuya kufuneka uhlangabezane neelayisensi, i-inshurensi kunye neemfuno zesicelo; Umvambo wabantwana ufuna imvume
Imvume yomzali iyafuneka kwiitattoos.
Amagcisa eTattoo afuna isiQinisekiso soBhaliso; Iitatto azivumelekanga kubantwana.
EMissouri Ilayisensi iyafuneka; Iitatto kubantwana zifuna imvume yomzali kunye nobukho
EMontana Amagcisa eTattoo kufuneka ahlangane nemigaqo yelizwe; imvume yomgcini okanye yomzali iyafuneka kumvambo wabantwana.
Nebraska Imithetho yabantwana abenza umvambo ifunyanwa phantsi komthetho wobugcisa bomzimba.
INevada I-Tattooing ayilawulwa ngurhulumente.
ENew Hampshire Kufuneka ube nelayisensi; Abancinci bafuna umzali okhoyo kunye nemvume ebhaliweyo ekufuneka ibe kwifayile kangangeminyaka esixhenxe
Enew Jersey Kufuneka uhlangane nemigangatho yelizwe
ENew Mexico Iimfuno zempepha mvume kufuneka zifezekiswe.
Inew York Ukwenza umvambo kubantwana akukho semthethweni.
North Carolina Amagcisa eTattoo afuna imvume, ngaphandle kokuba ugqirha okanye usebenza phantsi kogqirha; Ukwenza umvambo ebantwaneni akuvumelekanga.
Imvume kunye nobukho bomzali ziyafuneka kumvambo womntwana omncinci.
Iitattoos kubantwana zifuna imvume ebhaliweyo.
iziselo ukwenza ngeapile yesithsaba
Oklahoma Ilayisensi iyafuneka liSebe likaRhulumente lezeMpilo yoLuntu labazobi be tattoo.
Oregon Amaphepha-mvume ayafuneka.
IPennsylvania Abancinci bafuna imvume yomzali okanye yomgcini wokufumana itattoo.
IRhode Island Kufuneka kuzalisekiswe inzalo kunye nococeko
Iitattoos azivumelekanga kwabo bangaphantsi kweminyaka engama-21 ngaphandle kokuba banemvume yabazali ukuba ngaphezulu kweminyaka eli-18.
Imigaqo imiselwe liSebe lezeMpilo; imvume esayiniweyo iyafuneka kubantwana abenza umvambo.
ETennessee Abancinci abali-16 nangaphezulu banokufakwa itattoo ngemvume.
ETexas Amaphepha-mvume ayafuneka; abo bangaphantsi kweminyaka eli-18 nangaphantsi abavumelekanga ukuba bafumane iitattoo ngaphandle kokuba kukugubungela kwaye kukho i-tattoo engamanyala okanye ekhohlakeleyo - imvume yabazali iyafuneka kuloo meko.
Utah Iitattoos kubantwana zifuna imvume ebhaliweyo.
IVermont Abancinci banokubhalwa kumvambo ngemvume yomzali.
IVirginia Iindawo zokuzonwabisa ngomvambo kufuneka zilandele imigaqo yengingqi; Ukwenza umvambo kumntu ongaphantsi kweminyaka eli-18 kufuna imvume ngaphandle kokuba kwenziwe ngugqirha.
EWashington Kufuneka uhlangane nezikhokelo zikarhulumente zococeko; Ukwenza umvambo kwabo bangaphantsi kwe-18 akukho semthethweni
ENtshona Virginia Abancinci bafuna imvume ebhaliweyo.
IWisconsin Amaphepha-mvume kunye nemimiselo ebekwe lisebe lezempilo; ngoogqirha kuphela abanokubonisa abantwana tattoo
Wyoming Kukho iimfuno zobudala zabazobi be tattoo; Abancinci bafuna imvume yabazali kunye nokuqinisekiswa kobudala.
Ngayo INkomfa yaBalawuli beLizwe
Imithetho yaseKhaya yeNgingqi
Ukufumana imithetho ye tattoo yendawo, qala ngewebhusayithi yelizwe. Wonke urhulumente unesebe lezempilo, kwaye uninzi lunecandelo leetattoos. Amazwe ambalwa alawula ii-tatoo phantsi kwamasebe angalindelekanga, afana nalawo ajongene neeresityu.
Imithetho yeSixeko kunye neNgingqi
Kwimithetho yedolophu kunye neyephondo, zama kwakhona iwebhu. Jonga ukubona ukuba likho isebe lezempilo lasekuhlaleni, okanye ukhangele 'i-tattoo' kwiwebhusayithi yorhulumente wengingqi. Kuya kufuneka ungene emnxebeni kwaye utsalele ii-ofisi zasekuhlaleni ukufumana ulwazi oludingayo.
Ezinye iinkxalabo ezinxulumene noRhulumente
Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa usenza umvambo, kwaye ekubeni imithetho iyahluka ngokwaseburhulumenteni, izinto zinokuxakaniseka ngokukhawuleza. Umzekelo, ukuba ukwelinye ilizwe, unokufumana itattoo. Nangona kunjalo, ukuba ungaphantsi kweminyaka eyi-18, oku kunokuba nzima. Kuba iitatto zilawulwa kakhulu kubantwana kwaye iminyaka yokuvuma yahlukile kumazwe ahlukeneyo, ngokwe-NCSL, ngekhe ubenakho ukufumana umvambo ngaphandle kwelizwe lakho. Abanye amagcisa abayikhathaleli imithetho ye tattoo ukuba ungumhlobo, nangona kunjalo, khumbula ukuba umculi ubeka ilayisensi yakhe emngciphekweni kwaye angatshutshiswa ngokwaphula umthetho.
Kuba imithetho iyahluka ngurhulumente, ukubeka iitatto kumazwe amaninzi kunokuba yinto ekhohlisayo. Umzekelo, ukuba usebenza kurhulumente ngaphandle kwemigaqo efana neMinnesota, kodwa ufuna ukwenza itattoo eMantla Carolina, kuya kufuneka ulandele imithetho yelizwe ye-NC. Oku kuthetha ukuba unokucelwa ukuba ufumane ilayisensi yethutyana okanye ummiselo wokufaka i-tattoo kwelinye ilizwe. Nangona kunjalo, ukuba ubhala umvambo kumazwe amabini anemigaqo encinci ke ukwenza umvambo phakathi kwaba babini kunokungafuneki nakuphi na ukuqwalaselwa okukhethekileyo.
Jonga iMithetho ngalo lonke ixesha
Imithetho inokutshintsha ngokuhamba kwexesha njengoko amazwe amaninzi esiba nokuyekelela ngakumbi malunga nokuvumela umvambo ngokubanzi, kodwa eminye inokuba ngqongqo ngakumbi. Jonga imithetho ekwisimo sakho ngalo lonke ixesha ngaphambi kokuba ufumane itattoo ukuze uzigcine ukhuselekile kwaye uyenze i-inki yakho ngokufanelekileyo.
Umlibo Wokuzalwa Uphando Iselfowuni Iifowuni Imisebenzi Yabantwana Iinkampani Ze-Inshurensi Ukwenza Amakhandlela
Imisebenzi Imiboniso Yeslides
Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nobuntu
Indlu Cleaning Tips
Ikhekhe Decorating Techniques
uyenza njani ipisces man ikuleqe
imigca elungileyo lokuvula online ukuthandana
Iindawo ezincinci ezibuhlungu zeetattoos kubafana
Uluhlu oluprintiweyo lwamazwe kunye nezihloko
Kubiza malini ukutshisa inja
Kunye Size Casual Outfits